राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको सम्झनामा उबेलाको दशैं
हाम्रो नेपालको सबैभन्दा ठूलो चाड कुन हो ? दशैं ।
सबैभन्दा रमाइलो ऋतु जहाँ वर्षदिनसम्मको मेहेनत फल्न लागेको छ ।
प्रकृति एकदम सुन्दर छ । खोलानाला शान्त भएका छन् । निलो बगेका छन् । प्रकृतिले पनि केही गरूम् भनेको छ ।
आफूलाई पनि फुर्सद भएको छ, र त्यसमाथि दुईटा कुरा थपिएका छन् ।
पहिलो कुरा- वर्षदिनसम्म परदेशतिर गएका मान्छे यही बेलामा घर आउँछन् ।
नौ दिनसम्म लगातार पूजा भएर दशौं दिन प्रसादका रूपमा टिका लगाउँछौं ।
रमाइलो जीवनमा चाहिन्छ । सधैं काम मात्रै गरेर पनि साध्य हुँदैन । विश्राम चाहिन्छ । हामीलाई आफ्नो संस्कृति पनि चाहिन्छ ।
आफ्नो संस्कृति रमाइलो नभएको देश शून्य देश हो । हामीले पहिलेको दशैंमा वर्षदिनसम्म नयाँ लुगा लगाउन पाएको थिएनौं ।
अहिले त दिनको तीनचोटि लुगा फेर्छन् । उ बेलामा वर्षमा दुई जोर लुगा हुन्थे । एउटा राख्ने लुगा अर्को लाउने लुगा । उ बेलामा बाहिर गएका मान्छे लर्को लाएर आउँथे ।
अहिले बाहिर गएकाहरू भन्नेबित्तिकै आउन नपाउने बाध्यता पनि हुन सक्छ ।
अमेरिकामा कुनै कम्पनीमा काम गर्दैछ भने भन्नासाथ हवाइजहाजको टिकट नपाउन पनि सक्छ ।
यद्यपि आँट्यो भने २४ घण्टामै आउन पनि सकिने अवस्था छ अहिले । उ बेलामा चाहिँ चाहेर पनि ढिलो हुन्थ्यो ।
धेरै फरक छ पहिलेको र अहिलेको दशैंमा ।
टुँडिखेलमा धमाधम च्याङ्ग्रा आउँथे । 'धमोधम' भन्थे । धमाधम आए भनेको 'धमोधम' भन्थे । रमाइलो हुन्थ्यो टुँडिखेलमा पनि ।
अहिले त च्याङ्ग्रा ल्याएर राख्ने ठाउँ पनि छैन । र उबेलाको च्याङ्ग्राको मोल र अहिलेको च्याङ्ग्राको मोल पनि आकाश र जमिनको फरक छ ।
अहिलेको वर्ष त सागको मोल पनि त्यो बेलाको च्याङ्ग्राको मोल जति भएको छ ।
परदेशबाट आउने मानिसहरूको दुईटा कुरा छ ।
एउटा त माया हो । बाउआमा, इष्टमित्र साथीसंगीसँग भेटघाट । हामी मेसिन त होइन नि ! परिवारको माया पनि चाहिन्छ । सधैं काम गर्न सकिँदैन ।
अर्को भनेको कल्चर हो । त्यो भनेको पूजाआजा अनि आशिर्वाद आदानप्रदान हो । ठूलाबडाबाट लिइने आशिष र माया हो ।
सबै वर्ष सबैले आशिष पाउँछन् भन्ने छैन । यो आशिषको निम्ति पनि एउटा समारोह जोडेर आशिष लिइन्छ र दिइन्छ भने त्यसको कति महत्त्व होला ?
नवदुर्गाको पाठ । चण्डीको पाठ । त्यसै बसिरहेको थियो । जय देवी भैरवी… मालश्रीको धुन सुनियो । दशैं आयो कि के हो ? हो त नि ।
ओहो दशैं पो आयो ।
घटस्थापना आयो ।
ए घटस्थापना आइसक्यो ?
हो त नि !
हाम्रो त घरमा आमाले माटो ल्याएर जमरा राखिसक्नुभयो । उसकोमा शंखघण्ट बजाएर धुपधुँवा गरेर धुन्धान छ । तिमीहरूको घरमा छैन ?
हाम्रो पनि बिहान सबै गरियो ।
किन गरेको भनेको त दशैं पो लागेछ ।
ओहो ! रमाइलो अब ।
सबै रमाइलै रमाइलो ।
पिङ हाल्नुपर्‍यो । धर्ती छोड्नुपर्‍यो । एक किसिमको पिङ हो र ! दुई किसिमको । रोटे पिङ र लिंगे पिङ । रोटे पिङमा त स्वर्ग गयो अनि फेरि धर्तीमा आयो ।
कसैले हाम्रो गालामा चट्कायो भनेदेखि हामीले पनि चट्काइदिने । अनि शक्तिको पूजा गर्ने । नवदुर्गाको पूजा गर्ने । अष्टमातृकाको पूजा गर्ने । मातृका देवीहरूको रूप झल्झलाउँदो हुन्छ अरे ।
कन्याको रूपमा पूजा हुन्छन् । काठमाडौंको देवालयहरूमा अरूको चाहिँ कम बढी भगवतीका मूर्ति हुन्छन् । भुटानबाट पनि आफ्नो पुर्खाको देवी भनेर पूजा गर्न नेपाल आउँछन् ।
शक्तिको पीठहरूमा कन्याको नवदुर्गाको पूजा गर्नु नै शक्तिको पूजा गर्नु हो । संस्कृतमा एउटा उक्ति छ, मुर्खमाथि मुर्ख्याइँ नै गर्नु ।
शठे शाठ्यम् समाचरेत् । कसैले मुर्ख्याइँ गर्छ भने आफूले पनि मुर्ख्याइँ गर्ने ।
अब धार्मिक कुरा, चण्डीमा कस्तो कल्पना छ भने खलबल सुनियो । दैत्यले के को खलबल हो भनेर भने । यस्सो हेरेको त हिमाल भर्खर घामको झुल्कामा परेको पहेंलो सुनौला हिमालमाथि सिंह अनि सिंहमाथि पनि भगवती चढेको पो देखियो । बा… चण्डीको कत्रो बडा कल्पना । अनि अष्टमातृकाहरू सप्पै हाम्रो मनको भावनाहरू । कामवासना र प्रेम ।
अहिले कामवासना उत्पात भएर कन्याहरूलाई बाहिर हिँड्नै मुस्किल भएको छ । लाजमर्नु कुराहरू पनि भएका छन् ।
हाम्रा नौवटै मानवीय मूल्यहरू छन् । तिनीहरूलाई कामवासनाको मूर्तिकरण गरेर देवीको रूप दिएर प्रेमको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । कामवासना मात्रै भयो भने पशु र हामीमा के फरक भयो र ? कामवासनासँगै प्रेम पनि हुनुपर्छ । हाम्रा मानवीय मूल्यहरूमा विचलन आउन थाल्यो भने हतियार लिएर चण्डीको अवतारमा आह्वान गर्छन् ।
कहिलेकाहीँ समाज परिवर्तन हुन्छ । तर आफ्नो चाडबाडलाई निन्दा गर्नु हुँदैन ।
त्यो पर्व हिन्दूको हो, नमनाउने त्यो भन्ने होइन ।
हिन्दूको हो, रमाइलो नै हुन्छ । आफ्नै देशको पर्व हो । जाने हो रमाइलो हेर्ने हो । बिदा पनि दिइएको छ । टुँडिखेलमा त्यही दिन बन्दुक पनि पड्किन्छ । जानुपर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ ।
छठमा पनि हामी जाने हो, हेर्ने हो । एउटाले मनाएको दशैं अर्कोले हेर्नुपर्छ किनभने राष्ट्रभित्रको कुरा हो नि त ! राष्ट्रमा फरक-फरक संस्कृति, पर्व छ भने त्यो आफ्नै त हो ।
मेरै गण्डकी हो भनेर भन्न थालियो भने बाग्मती के गर्ने ? बाग्मती उतै राख मलाई गण्डकी भए पुग्छ भन्ने त होइन नि !
सबै खोलानाला, नदी चाहियो । सातै प्रदेश चाहियो । मिलेर बस्नुपर्छ । त्यो चाहिँ हामी नेपालीको विशेषता पनि हो ।
एउटालाई पर्दा अर्कोले सहयोग गर्नु हाम्रो काम हो । त्यो नै मानवीय मूल्य हो । परस्परमा माया गर्ने र रमाइलो गर्ने कुरा पो बढी त ।
(राष्ट्रकवि माधव घिमिरेसँग लोकान्तरकर्मी प्रदिप अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)